China Custom 28/400 28/410 28/415 Plastic PP Material Head Trigger Triger Sprayer For Bottle Production and Factory | Yongxiang
Ngokwezifiso 28/400 28/410 28/415 Plastic PP Material Head Trigger Triger Sprayer Sebhodlela
Izifutha zethu ze-Trigger zinengqikithi yemiklamo ehlukene engu-9 yesembozo se-sprayer ongakhetha ngayo.Kunosayizi wokuvala aba-3 ongakhethwa: 28/400,28/410 kanye no-28/415. Izinketho zeNozzle zinesifutho, zigeleza futhi zivaliwe. Intamo ihambisana kahle nebhodlela, engagwema ukuvuza. Umsebenzi we-trigger ufafaza ngomphumela omuhle we-atomization. Lonke lolu hlobo lwe-trigger sprayer lungaba ne-foam nozzle eyengeziwe.
ikhanda eline grating engagqwali. Mayelana nombala wemikhiqizo, kuncike kuwe!
I-Trigger sprayer isetshenziselwa ukuhlanza imikhiqizo nokunisela izitshalo. I-Trigger sprayer nge-foam nozzle ingakhiqiza igwebu elicebile nelithambile, elivame ukusetshenziselwa ukuhlanza amawindi, okokuhlanza ekhishini, nolunye uketshezi.
Usayizi: 28/400, 28/410, 28/415
Material: PP, PE, POM, 304STAINLESS Steel, IBHOLA LEGLASS
Umthamo: 0.8-1.2 ML/T
I-QTY yesitsha esingu-20″: 190,000-220,000PCS
I-QTY yesitsha esingu-40″: 460,000-500,000PCS
Vuliwe / Vala I-Nozzle
Le Trigger Sprayer iza nesiketi esinezimbambo sokusonteka kalula ngezandla ezishelelayo kanye nokufinyelela kalula kokuqukethwe ngaphakathi kwebhodlela. Ngaphezu kwalokho, lesi sifutho sepulasitiki esinezimbambo ezimhlophe sifaka umlomo wombhobho Wokuvula/Ukuvala esihlokweni sesifafazi. Ungakwazi ukusonta umlomo wombhobho Wokuvula/Ukuvala ngokwewashi noma ngokuphambene newashi izikhathi eziningi ukuze uvale ukuphuma kusifafazi. Uma ikwindawo evaliwe ivimbela isifafazi ukuthi singaphumi ngengozi futhi sigcine isiqhumiso sime ngendlela engemuva.
Okukhiphayo kanye ne-Dip Tube
Lesi sifafazi se-skirt esinezimbambo sepulasitiki esimhlophe sinamandla okufutha angaba ngu-0.8-1.2cc ngesifutho ngasinye. Uma umlomo wombhobho usethelwe ku-On position, lesi sifutho sikhipha isifutho senkungu esilawulwa kahle esimboza ingubo enkulu yendawo engaphezulu. Okokugcina, Ubude be-Dip Tube: bungenziwa ngezifiso
Okokugcina, yenziwe ngepulasitiki ye-polypropylene engu-(PP) ephawulwe ngekhodi yokuhlonza inhlaka engu-5. I-Polypropylene ayiguquguquki kancane kune-LDPE, ithi iqinile kunamanye amapulasitiki. Ngaphezu kwalokho, Izifutho zethu zePlastiki Ribbed Skirt Trigger zingafika ngokuhlukahluka kokushintshashintshayo, okukhanyayo, okwemvelo, okumhlophe, nanoma yimuphi umbala. I-PP inokumelana okuhle kakhulu nokukhathala futhi inephuzu lokuncibilika eliphezulu kakhulu (320 degrees Fahrenheit noma 160 degrees Celsius).
Sengiphetha, ungakwazi ukubhanqa lesi Sifutho ngamabhodlela ahlukahlukene afana nosayizi wentamo engu-28-410. Isibonelo, inombolo yokuqala imele ububanzi beziqukathi ezivulekayo futhi ku-(mm). Inombolo yesibili imelela ukujula kwentambo yesiketi sokuvala. Ngamanye amazwi, Lesi sifafazi silungele noma yiziphi iziphuzo ezisukela kwezimonyo kuye emikhiqizweni yokunakekelwa komuntu siqu. Lapho iphampu icindezelwa, umkhiqizo ukhululwa ngenkungu enhle. Isibonelo, isifutho sinomphumela ongu-0.8-1.2cc ngomshini ngamunye oqinile.
Inzuzo yethu yile:
Zonke iziqhumane zethu ezihlanganiswe ngemishini ngokuzenzakalela, hhayi ngezandla zabantu, futhi sinomshini wokuhlola i-vacuum yesifafazi, ngakho-ke Yenzelwe ukuthi ingavuzi uma amathiphu ebhodlela ephelile.
Imikhiqizo yethu isebenzisa impahla yepulasitiki eluhlaza kanye neziphethu zekhwalithi enhle, Umzimba wangaphandle uvikela ukuhlanganiswa kwepiston ekulimaleni ngesikhathi sokusetshenziswa nokugcinwa.
Ukuhlanza Igumbi langasese, Ukugcinwa Kwendlu, Ukuhlanza Amawindi, Ukuwashwa Kwezimoto, Imininingwane Yezimoto, Ukulawula Izinambuzane, Ukunakekelwa Kotshani, Ukusetshenziswa Okuvamile.
I-Trigger Sprayers Ngezitayela Ezihlukahlukene kanye Nemiphumela Yokupakishwa Kwemboni ye-Mulitple
Izifutho ze-trigger ziyisici esibalulekile sokupakisha sezimpahla eziningi zokukhiqiza, njengezihlanzi zasendlini nezinto zokunakekela komuntu siqu. Njengomhlinzeki oholayo wezisombululo zokupakisha ezimbonini zonkana, i-YONGXIANG igcina ikhathalogi yezifutho ze-trigger ezihambisana nezidingo zakho zokukhiqiza izihlanzi zamawindi, okokuhlanza ekhishini, nolunye uketshezi.
Lapho ungeke ukwazi ukunquma ukuthi yisiphi isifutho esilungele kangcono umugqa womkhiqizo wakho noma iziqukathi ezikhona, ochwepheshe bokupakisha bakwa-YONGXIANG banikeza usizo lomuntu siqu. Ungathintana nelungu leqembu le-YONGXIANG ukuze ufunde mayelana nokulinganisa imihlangano yesifafazi se-trigger futhi futhi uxoxe ngezinketho zakho zama-oda wesifafazi se-wholesale ne-trigger eyinqwaba.
Thatha iminithi ukuze uphequlule ukukhethwa kwekhwalithi ephezulu kwezifafazi ze-trigger manje ezitholakala kuhlu lwe-YONGXIANG esitokweni. Faka umbuzo wakho wevolumu ephezulu ku-inthanethi manje noma shayela ithimba le-YONGXIANG ukuze nixoxe ngezinqubo zakho zokukhiqiza kanye nezinsuku zokugcina zokuthumela.
Okwedlule: Umkhiqizi Direct Sale Trigger Sprayer 28/400 28/410 Isigqoko Sesifutho Sezifiso Sesifutho Sepulasitiki Se-Daily Custom Authorized Tube
Olandelayo: Amabhodlela Amafutha E-Frosted Plastic Empty Angagcwaliswa kabusha Afutha Ukuhamba Nezipho,Ipeni Eliphathekayo elincane
28 400 I-Trigger Sprayer
28/400 I-Trigger Sprayer
I-Hand Trigger Sprayers
I-Head Trigger Sprayer
I-Ningbo Trigger Sprayer
I-Plastic Trigger Sprayer
Qalisa Isifutho 28/400
Qalisa Isifutho 28/410
Qalisa Isifutho 28/415
Qalisa Ibhodlela leSprayer
I-Trigger Sprayer Chemical Resistant
Qalisa Ikhanda leSprayer
Qalisa Iphampu Yesifutho
Iphampu yezitshalo zepulasitiki ezinikezela ngempahla eqondile...
28mm I-Trigger Spray 28/400 28/410 Isifutho Sezifiso...
I-Oral Sprayer Intengo Yokukhangisa Ethengiswa Kakhulu I-Ora...
I-Professional Plastic White Foam Dispenser 40MM ...
Umkhiqizi Ukuthengisa Okuqondile Kwe-Trigger Sprayer 28/400...